Nama Akkaan Nama Fayyadu - NuuralHudaa
Nama Akkaan Nama Fayyadu
Rasuulli ﷺ akki je’e:
Irra jaalatamaan namaa Rabbi biratti, nama akkaan nama fayyadu. Irra jaalatamaan dalagaa Rabbi biratti, gammachuu ati Qalbii nama Muslimaatti nayxu ykn rakkoo ati isarraa kaaftu ykn deeynii ati irraa kafaltu ykn beela ati isarraa ooftu. Haajaa Obboleeysa Muslimaa tokkoof deemutu, masjida kheeysa baatii takka i’itikaafa taa’urra naaf wayya…
Hadiisa kana kheeysatti Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam gorsa gaarii nuuf kenne. Gorsi Isaa hundi gaari hoggayyuu! Akka Hadiisni nuuf Ibsutti: Irra jaalatamaan namaa Rabbi biratti kan akkaan nama fayyadu. Nama fayyaduun eega irra jaalatamaa namaa Rabbi biratti ka nu godhuu, waan dandeenyeen wal fayyaduu qabna. Kan beekhu wallaalaa barsiisuun, Kan hojii hin qabneef hojii baasuun, kan hin fuudhin fuusisuun, tan hin heerumin heerumsiisuun, nama wal dhabe walitti tolchuu fii waan gaggaarii faaydaa je’amtu hunda waliif godhuu barbaachisa.
Hadiisa biraa kheeysatti Rasuulli sallallaahu Aleeyhi wasallam, “namni tokko muka karaatti jige akka nama hin rakkine kararraa kaasee araarama Rabbii argate” Je’e. Hadiisa biraa kheeysatti “intalti hojii hamtuu dalagaa turte Saree dheebotte bishaan obaasteef araarama Rabbi argatte” je’e.
Intala hojii hamtuu hojjattu waan Saree obaasteef yoo Rabbiin isiif araarame, Nama Muslimaa rakkatte yoo gargaarre hoo akkami?!
Kanaaf namni Rabbi biratti irra jaalatamaa namaa tahuu fedhe nama akkaan nama fayyadu haa tahu. Akkasumas Hadiisni waan nu barsiisurraa Irra jaalatamaan dalagaa Rabbi biratti gammachuu qalbii nama Muslimaatti naquudha ykn rakkoo irraa kaasuudha ykn deeynii irraa kafaluudha ykn ammoo beela Isa baasuudha…
Gammachuu qalbii walitti naquu osoo qabnuu gaddaa fii balaa walirratti tahuu hin qabnu. Meeqa kamtu jira kan maqaa nama balleeysuuf vidiyoo firraa waraabu, kan katabu, hamtuu muslimaa kan facaasu. Gaafa irra jaalatamaan dalagaa muslima gammachiisuu taate, isa gaddisiisuun ammoo cubbuu hamtuu taati beekhi.
Wanni biraa dalagarraa gaariin yeroo rakkootti wal bira dhaabbachuu, beelawaa nyaachisuu, liqii walirraa baasuudha.
Dhumarratti Hadiisa irraa dubbataa jirru kheeysatti Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam waan je’an:
“Haajaa Obboleeysa kiyya kan Muslimaa tokkoof deemuutu masjida kheeysa baatii takka i’itikaaf taa’urra naaf wayya…”
Haajaa Muslimaatiif deemuutu, Haajaa Isaa baasuuf wajjiin dhaabbachuutu baatii guutuu masjida kheeysa ibaadaf taa’urra naaf wayya je’an.
Nuti yoo wal bira dhaabbachuu akkatti guddifnee ni laallaa?
Nama akkaan nama fayyadu haa taanu! Haajaa Muslimaa wajji haa dhaabbannu.
Qophii: Abbaa Muhammad (Jaafar Bayaan)
October 18, 2021 sa;aa 4:37 pm Update tahe